Homeबिबिधम हात जोडेर बिन्ती गर्छु- नेपाललाई ‘इटाली’ हुनबाट जोगाऔँ
रमा वली, नेपालमा अहिले कोरोना सं,क्रमित संख्या बढ्दाे छ । यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जीवन क,ष्टकर छ । तर त्यसभन्दा पहिला यो बुझौँ, ईटालीका बासिन्दाहरूले हिजो हामीले जस्तै सामान्य रूपमा यो महामा,रीलाई लिएका थिए । उनीहरुले गरेको भूलको कारणले कस्तो परिणाम भोग्नु पर्यो। त्यस भूलबाट हामीले कसरी शिक्षा लिने ?
हामी अहिले घरमै वा क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित बसौँ । हामी अहिले बाटो, सडकमा नजाउँ, पुलिसले हाम्रो प्रत्येक क्रियाकलापहरुको निगरानी गरिरहेको हुन्छ। सबै बन्द भएको छ व्यापार, मलहरु, दोकानहरु । कुनैपनि बाटो, गल्ली, चाेक, सडकबजारमा चहल पहल देखिन्न ।
ढिलो गर्नु अघि नै सारा नेपाली ले सुन्नुहोस् अमेरिका युरोप ईटली जस्ता मुलुकलको अवस्था नेपालमा कोरोना संक्रमित बड्दो छ यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जीवन कस्तो छ” अनि यो बुझौ ईटालीले हिजो हामीले जस्तै सामान्य रूपमा यो महामा,री लाई लिएका थिए उनिहरुले गरेको भूलको कारणले कस्तो परिणामहरु भोग्नु पर्यो। अनि यो भूलहरुबाट हामीले कसरी शिक्षा लिने ?
मानिसहरु अलमल्ल छन् । उदास छन् । सबैमा एकतमासको छ,टपटि छ । साहाराविहीन छन् मानिसहरु। यो बुझ्न सकिरहेका छैनन् कि यो कटु सत्य मानवलाई कसले र कसरी थोपरे अनि यो दु:स्वप्नको अन्त कहिले हुन्छ ? सबैभन्दा ठुलो भूल यो थियो कि जब यो महामारीको पहिले आक्रमण भयो, तब मानिसहरुले त्यसको वास्ता नगरी आफ्नो दैनिकी सामन्य रुपमै चलाइरहे । सबैजना सडकहरुमा थिए । आ-आफ्नो काममा थिए । मनोरञ्जन गरिरहेका थिए । महामारी फैलिरहँदा पनि साथीहरु माझ भेला हुनु र भोज गर्नु सामन्य थियो ।
हिजो सबैजना गलत थिए र आज तपाई-हामीहरुले पनि गल्ती गर्दैछाैँ । म हात जोड्छु- कृपया, एकदमै सावधान बस्नुहोस् । नेपालमा सं,क्रमण बड्दो छ । यो हाँस्ने र हँसाउने विषय पटक्कै होइन । आफू जाेगिँदै, आफन्त जोगाउनु होस् । तपाईहरुका बुबाआमा, बाजेबज्यैलाई ख्याल गर्नुहाेस् । विशेष गरी यो सं,क्रमण उनीहरुको निम्ति एकदमै भ,यानक छ।
अहिले दैनिक हजाराैँ मानिस मरिरहेका छन् । सं,क्रमित भयानक देखिएको देशमा सबैको निम्ति ठाउँ छैन । अर्थात् स,क्रंमितहरुको संख्या यति छन् कि तिनीहरुलाई राख्ने ठाउँ छैन । अमेरिका, युराेप, इटली, स्पेनकाे हालत के छ । आज कसको म,र्ने पालो त्यो डाक्टरहरु समेत जान्दैनन् । यो सबै त्यहाँका नागरिकहरुले शुरुवातमा गरेको मुर्खताको कारणले हो जसले शुरुमा आफ्नो जीवन सँधै झैं सामन्य रुपमा जीउने निर्णय गरे भोली आउने परिस्थितिको ब्यवस्थापन गरेनन् ।
भी,ड़भाड़ भएको ठाउँमा नजानुहोस्, होटलको खाना अडर गरेर खाने काम सकेसम्म ब,न्द गर्नुहोस् । यस्तो समयमा घरमा नै धेरै समय बिताऔँ स्वास्थ्य विभागले दिएको दिशा निर्देशहरुलाई पालन गर्नुस् कृपया यसलाई मजाकमा नलिनुहोस् ।
कसैसित बातचित गर्दा एक मिटर टाढा बसेर कुराकानी गर्नुस् । सकेसम्म टेलिफोनदेखि कुराकानी गर्नुस् । नजिक नजानुहोस् कसैलाई अँगालो नमार्नुस् । कसैसंग लु,टुपुटु नगर्नुस् ।
सं,क्रमित हुनभन्दा अघि नै यसबाट बाँच्ने उपायहरु अपनाउनु बुद्धिमानी हाे । अन्य सं,क्रमित देशहरूले गरेको गल्तीहरुबाट पाठ सिक्नुस् । आफ्नो शरीरको प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाउनको निम्ति बेसीभन्दा बेसी भिटामिन “सी”को खुराक लिनुस्।
स्वास्थ्य कर्मचारीहरुलाई सहयाता गरेर यो महामा,रीलाई फै,लिनबाट रोक्ने उपायहरू अपनाऔँ । ईटली, स्पेन, फ्रान्स, अमेरिका लगायत देशहरूमा यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्थ्यो यदि मानिसहरुले शुरुमा नै स्वास्थ्य संस्था र सरकारले दिएको दिशा निर्देशहरुलाई पालन गरेको भए ।
र, नेपालमा पनि कोरोना भाईरस सं,क्रमित ब्यक्तिहरू ध,माधम देखिँदै छन् । हामीले सरकारले गरेको लकडाउन उ,ल्लंघन त गर्दै छैनौ, सावधान ! म हात जोडेर बिन्ती गर्छु- सबैजना सुरक्षित बसाैँ, घरमै बसाैँ । कृपया ! नेपाललाई इटाली वा स्पेनजस्ताे भयावह हुनबाट जोगाऔँ !!
buy tadalafil generic – buy real tadalafil online cheap tadalafil
is finasteride safe – http://finasteridepls.com/ propecia blind date
propecia price walmart – http://propechl.com/ finasteride before after
buy generic tadalafil online – tadalafil 75 mg tadalafil 10mg
Lcracw – Free viagra sample what is sildenafil